XOG RASMI AH: Cabdiweli Gaas oo booqday Jiidaha hore ee G. Sool, muxuuse la kulmay? – Puntlandtimes
October 16, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa subaxnimadii hore ee Talaadada booqday taliska ciidamada difaaca Puntland ee kusugan duleedka deegaanka Tukaraq oo ay Somaliland qabsatay bilowgii sannadkan, Xukuumadiisuna marar badan sheegtay in ay soo celinayso.
Madaxweynaha Puntland oo ay safarkiisan ku wehliyeen wasiiro iyo xildhibaano ka soo jeeda gobalka Sool, ayaa la kulmay taliyaasha ciidamada Puntland oo ay ka wada hadleen arrimaha halkaas ka jira iyo sidii dib loogu soo celin lahaa deegaanka Tukaraq.
Mid kamid ah xubnaha wafdigaas oo diiday in magaciisa la adeegsado ayaa cadeeyey in uu Madaxweynaha Puntland wada hadal gaar ah la yeeshay Taliyaha ciidamada DIfaaca Puntland Jen, Siciid Maxamed Xirsi (Siciid DHeere) oo uusan wanaagsaneyn xariirka kala dhaxeeyey mudooyinkii u dambeeyey.
Sarkaalkan la hadlay Puntlandtimes.com wuxuu kaloo u cadeeyey in ay Madaxtooyada Puntland qorsheynayso weerar dib ay ugu soo celiso gobalka Sool, oo ay dadaal badan waqtigan galinayso xiligeeda oo gabaabsi ku dhaw.
Wasiiro iyo Xildhibaano ka soo jeeda gobalka Sool, oo taageersan qorshaha Madaxtooyada Puntland ee waqtigan ayaa xooga saarayey maalmihii u dambeeyey sidii ay u diyaarin lahaayeen howlgal ugu yaraan ciidamada Puntland dib ugu qabsadaan deegaanka Tukaraq oo ka maqan gacanta Puntland 10 bilood.
Isimadda Sool, Sanaag iyo Madaxda ugu sareysa Xukuumadda Puntland ee kala ah Cabdiweli Maxamed Cali Gaas & Cabdixakiim Xaaji Cumar Camay ayaa yeeshay labo habeen kahor kulan ay uga wada hadlayeen arrimaha kuwajahan dagaal la qaado iyo in dib loo doorto, balse kulankaas ayaa fashil kusoo dhamaaday.
Talaabada ay xiligan bilowday Madaxtooyada ayaa u muuqata mid lagu dhimayo loolanka doorashada, isla markaasna ay qorsheynayso in ay dagaalka iyo doorashada isku xirto oo ay madaxda waqtigan ku helaan libin gaar ah, balse ilaa hadda siyaasiinta iyo musharaxiinta Madaxweyne-nimada kama aysan hadlin arrimaha Madaxtooyadu ay riixayso.
Mudada xil-heynta baarlamaanka Puntland waxaa ka haray 15 maalmood, waxaana waqtigoodu ku e’eg yahay 31 October 2018, iyadoo warqad rasmi ah lagu kala diri doono, waxaana doorashada Madaxweyne-nimada iyo tan kuxigeenka ka haray wax ka yar 70 maalmood, iyadoo madaxda hadda ay afar sanno iyo dheeraad waqti u haysteen arrimaha ku saabsan xaaladda gobalka Sool.
Hadalka ma waxaad ula jeedaa in sool xoreyn doonaan nimankaan jeebka xamar loogasoo buuxiyey. La arki doonee.
Gaas fursaddaa iskama khasaariyeen inuu muuqaal iskasoo duubo ee warkaa mala hubaa?????????.
WAA JIRAA KHILAAFKA SICIID DHEERE IYO GAAS.
Waxaa jira xogo isa soo taraaya oo laga helaayo sarakiisha magaalada Garoowe ee xarunta Puntland kaas oo sheegaya inuu jiro khilaaf weyn oo u dhaxeeya madaxweynaha puntland abdi-weli Maxamed Cali Gaas iyo taliyaha ciidanka Puntland Taliye Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere).
Khilaafkani iminka soo shaac-baxay ayaa la sheegay inuu salka ku hayo arrimo la xidhiidha dhismaha iyo kala saarista ciidamada Daacada u ah gaas iyo kuwa ka soo horjeeda,qaadista weerarka iyo fulinta qorshaha doorashada ama xaalada dagaal ee ka jirta gobalka Sool,si kasta oo ay tahaba khilaafka laba Masuul ayaan weli sii fiican banaanka loo soo dhigin madaama xidhiidhkoodu uu sii xumaanayey muddooyinkii ugu danbeeyey,laakiin Wararkii ugu danbeeyey ayaa sheegaaya in Abdi-weli gaas uu muddooyinkii danbe baadi-goob ugu jiray cidii uu ku bedalan lahaa Taliye Siciid Dheere oo ka soo horjeedda qorshihiisa dagaal,lakiin way adagtahay ayaa la sheegay , In nin khibrad dheer ku leh ciidamada isla markaana muddo dheer soo hayey xilka Taliyaha ciidanka Puntland laga qaado, waxuuna siciid dheere xilalkale ka soo qabtay mar-hore Ciidamada Soomaaliya ee muqdisho.
Sida ay inoo sheegeen ilo ku dhow Saraakiil ku sugan Garowe ayaa sheegaya in Abdi-weli Gaas ka codsaday Taliye Siciid Dheere inuu isagu u fududeeyo oo iskiis uu xilka iska-casilo .
Laakiin wuu ku gacan-sayray arintani.
Iyadoo arimahani ay ku soo beegmayso xili ay is-hor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan puntland iyo Somaliland gaar ahaan degaanka Tukaraq ee Gobolka Sool.
Wararkaasi ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in Taliye Siciid Dheere uga digay kana soo horjeestay dalabka gaas,wuxuuna sheegay haddii Abdi-weli gaas uu dagaalka daacad ka yahay, in aanu hawlgalada ciidamada ku soo beegi lahayn xiliga Doorashada Puntland,taasi oo shakiga abuurtay,siiba dhiiga dadkana ee uu doorashada ku galaayo.
Taliye siciid dheere ayaa isaga waxaa uu dhankiisa sheegay , in uu si weyn u dhaliilsan yahay qaabkii loo waday mrkii horeba ama loo maareynaayey hawlgalka Tukaraq oo la sheegay inuu doonaayey taliye siciid dheere in bilihii hore la qaado qorshe iyo tilaabooyin ciidan, hase-yeeshee qorshahaasi ay ka cago-jiidayeen abdi-weli iyo inta qorshaha la ogaa.
Isagoo intaa Ku daray
“Arrintani ayaa dhabar jab ku noqotay qorshihii kowaad oo aanu ka damacsanaayeen xaalada ciidan ee degaanka Tukaraq”.
Wuxu kaloo Yiri:,
“Iyadoo ay arimahaasi oo dhan ay jiraan , Ayaa hadana waxy noqotay wax aan la qaadankarin, in cabdi-weli gaas dhawaan doonaayo oo uu naga codsaday in hawlgalo cusub la bilaabo, iminka xili ay soo dhawaatay Doorashadii oo ay ka hadhsan tahay muddo ka yar sadex bilood.
Dhinaca kale Abdi weli m. ali gaas ayaa isagu la sheegay inuu xidhiidho kala duwan la kala sameeyey Qaar ka mid ah Saraakiishii hore oo arimaha ciidamada Soomaaliya hore uga soo shaqeeyey oo ka soo jeeda deegaanada puntland,si xilkaasi u qabtaan, laakiin dhamaantood waxaa la sheegay inay intooda badan ka cudur-daarteen in ay xiligan qabtaan xilkaasi uu hayo Siciid Dheere.
khilaafkani ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa iyadoo Guddoomiyihii hore ee xilka laga qaaday ee Gobalka Nugaal oo ay xidhidh fiican leeyihiin abdi-weli gaas la filaayay
in loo magacaabo hogaanka sare ee ciidanka,balse wax is-bedeleen loona magacaabay xil kale oo ciidan.
WAATAA WAXAY ISKU FAHMI WAAYEEN GAAS IYO TALIYAHU.
Maskaxda ilaahey kusiiyey maad wax kasoo meerisid intaad nin kale waxuu qorey aad jar oo ku dhaji kula shir tagi lahayd
Baarlamaanka waa inay Ku dhawaaqaan mudo kororsi ayaka iyo fulintaba oo sanad ah marka wakhtigooda dhamaado,si loo xoreeyo dhulka maqan.
GAAS MUDO KORORSI BUU SAMAYN BAA LAGU WAASHAY.
HA SAMEEYO,LKN WAA INUU SOO CELIYO LASCANO.
SICIID DHEERE WAA LOO TALIYE,WAANA INUU AMARKA QAATO SIDII ASKARI LAGU YAQIINAY,HADII KALE HALA BEDELO WAA KHAAINEE,HANA LA XIRO.
GAAS WAA LA DOORAN MAR LABAAD HADUU SIDAA SAMEEYO.
HA LAGA QAYB QAATO DIFAACA DALKA,DOORASHO LAHAANINEE.
LAMA JOOGO WAKHTI DOORASHO AYADOO DALKA LAGUSOO DUULAY.
Wali ninkii waalnaa meesha ma ku jiraa!.
Adeer ama meesha wax ku kordhi ama iska dhex qaad.
Amaan geli akhyaarta oo guul-wadaynta nala dhaaf.
Horta abdiweliyow yaabnaye gaas miyaa adiga??.
Kaniini two mise tahay.
Dadka ama wax ha qoraaniin ama hasoo copy-gareeyaane soo xaqiiqo ma ahan.
Ileen wax waalan waa wax waalanuun.
Habeen dhexdaa ahna Ani ayaad igu tufaysay sidii pl-times dadka waalan leeyahay oo loo daayo
C/weligaas Hawulgalkiisani Waamid Hore Loosii iclaamiyay Ama Lafilaayey Mana Aha Hada Dalxoreeyn Ee Waa Kaambayn
Suleimaan waxaan ku laqanyoodaa dadka maangaabyada ah iyo kuwa dameeru dhaan raaca ah . Nimankiinaan jeeganta ahna kalsooni la’aanta ayaan inku nacay oo idinkoo jeegaanimadiina ku kalsoon wax ma qori kadhaan. Sharaftu waxay ku jidha kalsoonida, guul iyo guuldaro tay noqotoba qofku ha la kulmee
Waa runtaa. Doorashadu muqadas ma aha oo markii wakhtigu saamaxo ayaa la qaban karaa. Anigu se waxaan rabaa in ay dhacdo si A.Gaas marlabaad talada puntland uu 5 sano la wareego oo shaqada dhiman dhamaystiro. Waan aaminsanahay in uu doorashada ku guuleysan doono Allah idinkii, sababtoo ah reer puntland diyaar uma ahan in qawleysato xamar lagasoo diray ay kala dhantaalaan oo albaabada iskugu dhuftaan, oo riyadii xoreyntana qarow dicisoobey ka dhigaan